Baiboly pejy 41 - Ny Baiboly
Voalohany < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Manaraka Farany
Eksaody toko 18 (tohiny)
3mbamin'ny zanak'i Seforà roa lahy; ny iray natao hoe: Gersama; fa hoy Moizy: vahiny aty an-tany hafa aho, 4ary ny iray natao hoe: Eliezera, fa hoy izy: Novonjen'ny Andriamanitry ny raiko aho, fa nafahany tamin'ny sabatr'i Faraona. 5Jetrao rafozan'i Moizy niaraka tamin'ny zanak'i Moizy sy ny vadiny, dia tonga nanatona azy tany an'efitra nitobiany, tany an-tendrombohitr'Andriamanitra; 6ka nampilaza tamin'i Moizy hoe: Tonga aty aminao aho, izaho Jetrao rafozanao mbamin'ny vadiano sy ny zanany roalahy miaraka aminy.
7Dia nivoaka hitsena ny rafozany Moizy; ka niankohoka sy nanoroka azy; ary rahefa nifanontany ny toe-pahasalamany avy izy aloha dia niditra tao an-dain'i Moizy. 8Notantarain'i Moizy tamin'ny rafozany avokoa ny nataon'ny Tompo tamin'i Faraona sy ny Ejipsiana, noho ny amin'Israely; ny fahoriana rehetra nanjò azy teny an-dàlana, ary ny namonjen'ny Tompo azy. 9Ka faly Jetrao noho ny soa rehetra nataon'ny Tompo tamin'Israely sy ny nanafahany azy tamin'ny tanan'ny Ejipsiana. 10Ary hoy Jetrao: Isaorana anie Iaveh izay nanafaka anareo tamin'ny tànan'ny Ejipsiana. 11Fantatro ankehitriny fa lehibe noho ny andriamanitra rehetra Iaveh, fa nampiharihary ny halehibeny izy, raha nampahory an'Israely ny Ejipsiana. 12Dia nanolotra sorona dorana sy fanatitra tamin'Andriamanitra Jetrao, rafozan'i Moizy. Ary Aarona mbamin'ny loholon'Israely rehetra dia tonga niara-nisakafo tamin'ny rafozan'i Moizy avokoa teo anatrehan'Andriamanitra.
13Nony ampitso nipetraka hitsara ny vahoaka Moizy, ka nitsangana teo anatrehany, hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, ny vahoaka. 14Nony nahita izay rehetra nataon'i Moizy tamin'ny vahoaka ity rafozany, dia nanao hoe: Inona ity ataonao amin'ireo olona ireo? Nahoana no hianao irery no mipetraka hitsara, ary ny olona rehetra mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva? 15Ary hoy Moizy tamin'ny rafozany: Ka inona moa fa manatona ahy ny olona hanontany hevitra amin'Andriamanitra. 16Raha manana ady izy ireo, dia mankaty amiko ka mitsara azy aho sy mampahalala ny didy aman-dalàn'Andriamanitra. 17Fa hoy ny rafozan'i Moizy taminy: Tsy tsara izao ataonao izao. 18Handreraka anao sy ny vahoaka izay eto aminao mihitsy izao, satria asa tsy eran'ny ainao izao, ka tsy vitanao samy irery. 19Koa henoy ny teniko: fa indro homeko hevitra hianao ary Andriamanitra anie homba anao: Aoka hianao ho solon-tenan'ny vahoaka eo amin'Andriamanitra, hanatitra ny adiny eo anatrehan'Andriamanitra. 20Ampahafantaro azy ireo ny fitsipika aman-dalàna, atoroy azy ny làlana tsy maintsy ombany, sy izay tsy maintsy ataony. 21Ary ankehitriny dia ifidiano lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra, ao amin'ny vahoaka rehetra, lehilahy marina sy tsy tia kolikoly, ka ireny no atsangano ho tompon'arivo sy tompon-jato, ary mpifehy dimam-polo amam-pifehy folo, hitondra azy ireo. 22Izy no hitsara ny vahoaka mandrakariva: ny raharaha lehibe hoentiny eo anatrehanao; ny raharaha madinika kosa hotapahin'izy ireo ihany. Hamaivano ny raharaha entinao, ary aoka izy ireo hiara-mitondra aminao. 23Raha manao izany hianao ka hatoron'Andriamanitra anao koa izay didiny, dia hahazaka izany hianao ary ny vahoaka koa ho tonga soa aman-tsara amin'izay halehany.
24Neken'i Moizy ny tenin-drafozany ary nataony avokoa izay nolazainy; 25fa nifidy izay lehilahy mahay tamin'Israely rehetra izy, ka notendreny teo amin'ny vahoaka ireo ho tompon'arivo sy tompon-jato, ary mpifehy dimam-polo amam-pifehy folo. 26Dia ireo no nitsara ny vahoaka mandrakariva; ny raharaha lehibe nentiny teo anatrehan'i Moizy; ny raharaha madinika notapahan'izy ireo ihany.
27Nanao veloma ny rafozany Moizy, dia lasa nody any amin'ny taniny Jetrao.
Eksaody toko 19
Ny fanekem-pihavanan'Iaveh amin'Israely - Iaveh teo an-tendrombohitra Sinaia.
1Tamin'ny volana fahatelo aorian'ny nivoahany tany Ejipta, tamin'izany andro izany, no nahatongavan'ny zanak'Israely tany an'efitr'i Sinaia. 2Efa niala tany Rafidima izy; ary nony tonga tamin'ny efitr'i Sinaia, dia nitoby tao an'efitra; tandrifin'ny tendrombohitra no nitobian'Israely.
3Niakatra ho ao amin'Andriamanitra Moizy, dia nantsoin'ny Tompo tao an-tampon-tendrombohitra izy, ka nilazany hoe: Izao no holazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy hambaranao amin'ny zanak'Israely: 4Hitanareo ny nataoko tamin'i Ejipta, sy ny nitondrako anareo tamin'ny ela-boromahery, ary ny nitarihako anareo ho aty amiko. 5Koa ankehitriny, raha mihaino ny feoko hianareo, sy mitandrina ny fanekeko dia ho vahoakako manokana eo amin'ny firenena rehetra, satria ahy ihany ny tany rehetra, 6fa hianareo no ho fanjakam-pisorona sy firenena masina ho ahy. Izany no teny holazainao amin'ny zanak'Israely.
7Tonga Moizy dia niantso ny loholon'ny vahoaka; noborahiny teo anatrehan'izy ireo avokoa ireo teny ireo, araka ny nandidian'ny Tompo azy. 8Ka indray namaly ny vahoaka rehetra nanao hoe: Hataonay avokoa izay rehetra voalazan'ny Tompo. Dia lasa Moizy nitondra ny tenin'ny vahoaka tany amin'ny Tompo, 9ka hoy Iaveh tamin'i Moizy: Indro fa hankeo aminao ao anatin'ny rahona matevina aho, mba ho ren'ny olona rahefa miteny aminao aho, dia hinoany anao mandrakariva koa. Ary nolazain'i Moizy tamin'ny Tompo ny tenin'ny vahoaka.
10Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Mandehana mankany amin'ny vahoaka, ka hamasino izy anio sy ampitso, ary asaovy sasàny ny fitafiany. 11Aoka ho voaomana amin'ny andro fahatelo izy, fa hidina eo an-tampon'ny tendrombohitra Sinaia, eo imason'ny vahoaka rehetra Iaveh, amin'ny andro fahatelo. 12Asio faritra manodidina ka lazao hoe: Tandremo mba tsy hiakatra ny tendrombohitra hianareo, na hikasika ny sisiny akory, fa hatao maty izay mikasika ny tendrombohitra, na iza na iza. 13Tsy hokasihin-tànana io, fa hotoraham-bato na hotrobarana ny zana-tsipika: na biby na olona izy tsy azo velomina. Rahefa maneno ny trompetra dia hiakatra ho eo an-tendrombohitra izy ireo. 14Dia nidina avy any an-tendrombohitra Moizy nankeo amin'ny vahoaka ka nanamasina azy, ary nanasa ny fitafiany izy ireo. 15Nony vita izany dia hoy izy tamin'ny vahoaka: Aoka ho voaomana ao anatin'ny hateloana hianareo; aza mikasi-behivavy.
16Nony marainan'ny andro fahatelo, dia nisy kotroka aman-tsela-baratra ary rahona matevina teo an-tendrombohitra, ary nisy feon'ny anjomara mafy nitatatata, ka tera-kovitra ny vahoaka rehetra tao an-toby. 17Nentin'i Moizy nivoaka ny toby ny vahoaka, handeha hihaona amin'Andriamanitra; dia teo am-pototry ny tendrombohitra izy ireo no nijanona. 18Nivoa-tsetroka ny tendrombohitra Sinaia manontolo, satria tanaty afo no nidinan'ny Tompo nankeo amboniny, ka nipololotra toy ny avy amin'ny lafaoro lehibe ny setroka, ary nihovitrovitra iray ihany ny tendrombohitra manontolo. 19Nihamafy nihamafy ihany ny feon'anjomara. Ary niteny Moizy, ka namaly feo azy Andriamanitra. 20Nidina Iaveh nankeo an-tendrombohitra Sinaia, dia teo an-tampon'ny tendrombohitra izany; ary Iaveh niantso an'i Moizy ho ao an-tampon'ny tendrombohitra, dia niakatra Moizy.
21Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Midìna ka rarao mafy ny vahoaka tsy hihoatra ny faritra hankaty amin'ny Tompo mba hijery, fandrao hahafatesana maro izy. 22Na ny mpisorona manatona an'ny Tompo aza, aoka hanamasin-tena fandrao vonoin'ny Tompo. 23Dia hoy Moizy tamin Íaveh: Tsy hahazo miakatra ny tendrombohitra Sinaia ny vahoaka, satria efa voararanao mafy izahay nilazanao hoe: Asio faritra manodidina ny tendrombohitra, ka hamasino izy. 24Ary hoy Iaveh taminy: Mandehana midina aloha, izay vao miakatra indray hianao miaraka amin'i Aarona: fa ny mpisorona sy ny vahoaka, aoka tsy hihoatra ny faritra hiakatra hankaty amin'ny Tompo fandrao vonoiny. 25Dia nidina nankeo amin'ny vahoaka Moizy, nilaza izany.
Pejy: Voalohany < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2332 seconds